Ampidino Flashnote ho an'ny Windows
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (2.39 MB)
Flashnote dia programa fandraisana an-tsoratra tena tsotra sy azo ampiharina izay azonny mpampiasa ampiasaina aminny fitantanana ny asany isanandro.
Ny programa izay manatanteraka ny fizotry ny fametrahana dia somary tsotra ihany, rehefa vao mihazakazaka ny programa ianao dia hipetraka eo aminny fitoeram-bokatra izany ary ho ampy ny manindry ny kisary programa eo aminny fitoeranny rafitra hahatratra ny varavarankely lehibe anny programa.
Ny programa, izay tena mora ampiasaina, dia afaka ampiasainny mpampiasa solosaina aminny ambaratonga rehetra. Mandritra izany fotoana izany, ny Flashnote dia manana mpizara mpampiasa tena tsotra sy voalamina tsara.
Rehefa te-hamorona naoty vaovao miaraka aminilay programa ianao, izay misy ihany koa ny fanohananny fiteny Tiorka, dia ampy ny manindry ny bokotra Add New Note. Avy eo ianao dia afaka mamonjy ny naotinao aminny alàlanny fampidirana ny lohateny sy ny naotinao. Miaraka aminilay programa, izay ahafahanao mamorona naoty kely ihany koa aminny alàlanny fanangonana ireo naoty anao aminny lohateny samihafa, dia azonao atao ny manara-maso mora foana ny asa rehetra ilainao atao isanandro aminny fandraisana an-tsoratra.
Ny programa, izay ahafahanao mikaroka aminny alàlanny naoty nataonao ihany koa, dia manolotra safidy manokana ho anny personalization sy customization ho anny mpampiasa. Mandritra izany fotoana izany dia azo ampiharina ilay programa, izay manana fiasa maro azonao ampiasaina aminny alàlanny fanalahidinny lakilenny hitsin-dàlana.
Ny programa, izay mihodina saika tsy misy loharanom-pahavitrihana mandreraka, dia manana fomba faranizay kely dia kely aminny fampiasana CPU sy RAM. Nandritra ny fitsapana nataoko taminny Flashnote, izay misy fotoana valiny tena tsara, tsy nifanena tamina fiampangana na hatsiaka na olana aho.
Raha mila programa ianao mba hahafahanao manaraka tsara ny asanao isanandro aminny alàlanny fanoratana kely, dia tena mamporisika anao aho hanandrana Flashnote.
Haben'ny rakitra: 2.39 MB